विपक्षी – Himalaya Television
रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नी पक्राउ
५ माघ २०७७ मस्को । रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नी पक्राउ परेका छन् । विष दिएका कारण झण्डै ज्यान गुमाएका नेता नाभाल्नीलाई जर्मनीबाट मस्को फर्किएको केही समयमै हिरासतमा लिइएको हो । रुसी राष्ट्रपतिका कट्टर आलोचक विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नी...
उखु किसानको आन्दोलनमा विपक्षी कांग्रेस र जसपाको ऐक्यबद्धता
३० मंसिर, २०७७ काठमाडौं । उखु किसानको आन्दोलनमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । काठमाडौंको माइतीघरमा धर्नामा बसेका किसानलाई भेटेर कांग्रेस र जसपाका नेताहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । माइतीघर पुगेका नेताहरु...
विपक्षी नेताको प्रश्न–स्वास्थ्य महामारीमा त भ्रष्टाचार गर्ने सरकारले अरुमा के गर्‍यो होला ? (भिडियोसहित)
१७ मंसिर, २०७७ पर्सा । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान सरकार इतिहासकै भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउनुभएको छ । वीरगंजमा आज संचारकर्मीसँग नेता महतले सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि कोरोना नियन्त्रणमा समेत अनियमितता गरेको आरोप लगाउनुभयो ।...
यसरी गर्दैछन् विपक्षी दलले सरकार र ओलीमाथि हमला (भिडियोसहित)
४ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ । शीर्ष नेताबीच लिखितरुपमै आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । तर नेकपाभित्रको यो झगडा अब आन्तरिक मात्र रहेन । यसले राष्ट्रिय रुपमै हलचल ल्याएको छ ।...
पाकिस्तानमा विपक्षी नेता शाहबाज शरिफ भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ
१२ असोज, २०७७, इस्लामावाद । पाकिस्तानको विपक्षी दलका नेता शाहबाज शरिफ भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका छन् । शरिफ प्रतिपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज)का अध्यक्ष हुन् । उनका दाजु पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेलमा छन् । सम्पत्ती...
रुसका विपक्षी दलका नेताको उपचार जर्मनीमा हुने
६ भदौ, २०७७, मस्को । रुसका विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नी थप उपचारका लागि जर्मनी जाने भएका छन्। कोमामा रहेका ४४ वर्षीय नाभाल्नीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उनलाई जर्मनी लैजान सहमती जनाएका हुन् । शुरुमा उनको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अर्को...
संसद अन्त्य गरिएकोमा विपक्षी दल कांग्रेसको आपत्ति
१८ असार, २०७७ काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपली कांग्रेसले संघीय संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकाली सत्तारुढ दलभित्रको द्वन्द्वको दुश्प्रभाव संसद अधिवेशनमा पर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनु भयो । अधिवेशन...